झापामा ५० करोडको जग्गा बै’ना, डेढ करोड क’मिसनको लागि ३ जनाको ह’त्या !
झापामा ५० करोडको जग्गा बै’ना, डेढ करोड कमिसनको लागि ३ जनाको ह’त्या !
तीन जनाको ह’त्या आ’रोपमा प’क्रा’उ परेका अनिलकुमार मण्डलले ह’त्या जग्गा कि’नबे’च गर्दा आउने कमिसनका कारण भएको प्रारम्भिक बयान दिएका छन् ।
अपराध महाशाखा काठमाडौं र मोरङ प्र’हरीसमक्ष दिएको प्रारम्भिक बयानमा ह’त्याको कारण जग्गाको बैना वापत आउने क’मिसन नै रहेको आ’रोपीले बताएका हुन् ।
प्र’हरी स्रो’तका अनुसार यी चारजना जग्गा व्यवसायीको समूहले झापामा ५० करोडको जग्गा बै’ना गराएको थियो । जग्गा कसले कसलाई गराएको स्पष्ट नभएपनि ५० करोडको जग्गा बैना गराएवापत ३ प्रतिशतले हुन आउने डेढ करोड रुपैयाँ कमिसन आउने पक्कापक्की भएको थियो ।
तर कमिसनका विषयमा लिम्बुले धेरै भाग खोजेपछि क’मिसन एकलौटी पार्ने उ’द्देश्यका साथ मण्डलले पहिले लिम्बु र पछि अन्य दुई जनाको ह’त्या गराएका थिए ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार जग्गाको कमिसनको विषयमा कुरा नमिलेपछि मण्डलको समूहले मंसिर २८ गते लिम्बुलाई ललितपुरको धापाखेलमा बोलाएर ह’त्या गरेको थियो । उक्त ह’त्याका’ण्डको पोल खुल्ने डरले पछि मण्डलको समूहले राजेन्द्र कुमार श्रेष्ठलाई पुषको ५ गते र शम्भु चौधरीलाई पुषको ७ गते मोरङमा ह’त्या गरेका थिए ।
त्यसपछि श’व वे’पत्ता बनाउन लिम्बुको शव धापाखेलकै एक घरको कम्पाउन्ड र श्रेष्ठ र चौधरीको श’व मोरङको धनपालथान गाउँपालिका ७ कमलपुरमा रहेको उखुबारीमा खाल्डो खनेर गा’डिएको थियो । छिटो श’व गलाउनका लागि उनीहरुले सबै स्थानमा नुनको प्र’योग गरेका थिए ।
ह’त्याको आ’रो’पमा प्रहरीले तत्काल तीन जनालाई प’क्रा’उ गरेको छ । प’क्रा’उ पर्नेमा सिराहा नगरपालिका वडा नं २१ सिराहा घर भई बल्खु बस्ने ३१ वर्षीय अनिलकुमार मण्डल, जहदा गाउँपालिका ४ सिस्वनी बस्ने वर्ष २९ को अमित साह भनिने दीनानाथ सोनार र धनपालथान गाउँपालिका ७ कमलपुर बस्ने ६२ व’र्षीय नासिर आ’लम छन् ।
ह’त्यामा अन्य केही नेपाली तथा भारतीय नागरिकको पनि संलग्नता रहेको र उनीहरु फ’रार रहेकाले खो’जीकार्य भइरहेको प्र’हरीले जनाएको छ ।
मण्डलले चारजना भारतीय नागरिकलाई २० लाख रुपैयाँ दिएर श्रेष्ठ र चौधरीको ह’त्या तथा श’व व्य’वस्थापन गर्न लगाएको प्र’हरीले बताएको छ ।
२०७८ माघ २१, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 108 Views